OTU ESI AGBANYE IGWE OKWU NA SKYPE - SKYPE - 2019
Iji kwurịta okwu na Skype na ụdị ọ bụla ọzọ karịa ederede, ịchọrọ igwe okwu. Enweghị igwe okwu, ịnweghị ike ịkpọ ma ọ bụ na oku oku, ma ọ bụ na oku vidiyo, ma ọ bụ n'oge ogbako n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ. Ka anyị chọpụta otu esi agbanye igwe okwu na Skype, ọ bụrụ na agbanyụrịrị ya.
Iji gbanye igwe okwu na Skype, ị ga-ebu ụzọ jikọọ ya na kọmpụta ahụ, ọ gwụla ma ọ bụ na ị na-eji laptọọpụ na igwe eji eme ihe. Mgbe ijikọ ya dị ezigbo mkpa ka ị ghara imegharị kọntaktị kọmputa. Ndị ọrụ na-enweghị atụ, ndị na-enweghị ihe ọmụma, kama ụda igwe okwu, jikọọ nkwụnye ngwaọrụ na isi okwu ma ọ bụ ikpọ okwu. Dị ka o kwesịrị ịdị, na njikọ dị otú ahụ, igwe okwu anaghị arụ ọrụ. Nkwụnye kwesịrị iji aka dịka o kwere mee n'ime njikọ ahụ.
Ọ bụrụ na e nwere mgba ọkụ na igwe okwu n'onwe ya, mgbe ahụ, ọ dị mkpa iji weta ya na ọrụ ọrụ.
Dị ka usoro, ngwaọrụ nke oge a na sistemụ arụmọrụ anaghị achọ ka ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ na-akpakọrịta. Mana, ma ọ bụrụ na a na-enye CD nke CD na "ndị" ọkwọ ụgbọala "na igwe okwu, mgbe ahụ ịkwesịrị ịwụnye ya. Nke a ga-eme ka ikike nke okwu okwu ahụ dịkwuo mma, yana ịbelata ikekwe na-adịghị mma.
Kwado ekwenti na sistemụ
Enwere ike iji igwe okwu ọ bụla ejikọtara na ndabara sistemụ arụmọrụ. Ma, enwere oge mgbe ọ na-agbapụ mgbe usoro nkwụsị nke usoro, ma ọ bụ onye nwere nkwarụ aka ya. N'okwu a, ekwuru na ekwuru okwu okwu.
Iji mee ka igwe okwu rụọ ọrụ, kpọọ menu Malite, wee gaa Ogwe njikwa.
Na nchịkwa nchịkwa gaa na mpaghara "Ngwa na ụda".
Ọzọ, na windo ọhụrụ ahụ, pịa akara "Ụda".
Na windo meghere, gaa na taabụ "Dekọọ."
Nke a bụ ihe niile microphones jikọtara na kọmputa, ma ọ bụ ndị ejikọtara ya na mbụ. Anyị na-achọ igwe okwu anyị agbanyụrụ, pịa bọtịnụ òké aka ya, ma họrọ "Kwado" ihe na menu ihe.
Ihe niile, ugbu a, igwe okwu dị njikere ịrụ ọrụ na mmemme niile arụnyere na sistemụ.
Ịgbanye igwe okwu na Skype
Ugbu a, ka anyị chọpụta otu esi agbanye igwe okwu kpọmkwem na Skype, ma ọ bụrụ na agbanyụrịrị ya.
Mepee akụkụ "Ngwaọrụ", ma gaa na "Ntọala ..." ihe.
Ọzọ, gaa na mpaghara "Ntọala Ụda".
Anyị ga - arụ ọrụ na igbe okwu "Igwe okwu", nke dị na elu nke windo ahụ.
Mbụ, pịa ụdị nhọrọ ịchọta igwe okwu, ma họrọ igwe okwu anyị chọrọ ịgbanwuo, ọ bụrụ na ọtụtụ microphones ejikọrọ na kọmputa ahụ.
Ọzọ, lee "Mpịakọta" kachasị elu. Ọ bụrụ na ihe mmịfe ahụ nọ n'ọnọdụ kachasị elu, a na-ehichapụkwa igwe okwu, dị ka olu ya bụ efu. Ọ bụrụ na n'otu oge ahụ, e nwere akọrọ "Kwe ka setịpụ igwe okwu igwefoto", wepụ ya, ma mee ka ihe mmịfe ahụ gaa n'aka nri, dịka anyị chọrọ.
N'ihi ya, a ga-ahụta na site na ndabara, ọ dịghị ihe ọzọ ị ga-eme iji gbanwee igwe okwu Skype, mgbe ejikọsịrị ya na kọmputa ahụ, ọ dịghị mkpa. Ọ ga-adị njikere ozugbo ịga. A ghaghị ịgbanwere ihe ọzọ naanị ma ọ bụrụ na ọdịdị ọdịda dị, ma ọ bụ na-agbanyụọ igwe okwu ike.